လျင်မြန်စွာဖွင့်ရန်၊ Linux မှ
လျင်မြန်စွာဖွင့်, Geany အတွက်အခြား plugin ကို
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | applications များ, GNU / Linux များ, NOTICIAS, ပရိုဂရမ်းမင်း, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
တချို့ကအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ သူတော်ကောင်းတရားစာသားပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်အတွက်အလွန်ကြော့။ တိုးချဲ့နိုင်သောအသုံးဝင်သောအယ်ဒီတာ၊ ဒါပေမယ့်ပိတ်လိုက်တော့သူရေးသားသူ Mr. Jon Skinner နဲ့မပူးပေါင်းချင်ဘူး ("သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမပြောပြသောသူအားသင်၏လွတ်လပ်မှုကိုမရောင်းပါနှင့်") ခ Franklin).
၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့ကျကျဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာနှိပ်သောအခါလည်ပတ်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည် Ctrl +-P ကို, အယ်ဒီတာစာသားအကွက်ကိုသင်ဖွင့်သည့်နေရာတွင်သင်ဖိုင်တစ်ခု၏အမည်သို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုရိုက်ထည့်နိုင်ပြီး၊ တည်းဖြတ်သူသည်စီမံကိန်းအတွင်းရှိဖိုင်ကိုရှာဖွေသည်။ တိကျသောရှာဖွေမှုနှင့်နောက်မှမရေရာသည့်အရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်း ကြည့်ပါ
သင်ရှာဖွေနေသည်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်သိသည့်အခါ၎င်းသည်စီမံကိန်းသစ်ပင်အားလမ်းညွှန်ရန်၊ ဖိုင်အမည်များကိုဖတ်ရန်မလိုပါ။ ၎င်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတူတူသို့မဟုတ် ပို၍ နည်းသည် ညီညွတ်ရေး HUD.
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကငါအသုံးပြုခဲ့သည် မြွေခိုးခံရ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အယ်ဒီတာ Python ကို ထို့အပြင်အကောင်အထည်ဖော်သူကိုအန်တိုနီဘော့ဘ်သည် အမြန်ဖွင့်, Geany တိုးတက်ဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာငါခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် လျင်မြန်စွာ Open-tomía ငါ Snaked မှဤပေးဆပ်မှုကိုဖယ်ရှားပြီး၎င်းသည်သီးခြားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးထိုနောက်ငါ Lua ရှိ plugin မှတဆင့် Geany နှင့်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်, ထိုလမ်းဖြစ်ခြင်း:
ပထမဆုံး plugin ကိုအသုံးပြုရန် python-gtk2, python-glade2 နှင့် geany-plugin-lua
ဒေါင်းလုပ် ကော့ပန် (ပလပ်အင်) ၎င်းကိုမဖန်တီးပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင် folder .config / geany / plugins / geanylua / တွင် unzip လုပ်ပါ။
ထို့နောက် .config / geany / plugins / geanylua / hotkeys.cfg ဖိုင်ကိုဖန်တီးပါသို့မဟုတ်ပြုပြင်ပါ။
ပလပ်အင်အားကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းတစ်ခုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထိုအခါဖွင့်လှစ် ဂျီနီ သင်၏ကီးဘုတ်၏ဖြတ်လမ်းများအတွက်သင်၏ချိန်ညှိချက်များကိုကြည့်ပါ။ "တည်းဖြတ်" "" ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း "" "ပေါင်းစပ်ခြင်းများ"နှင့်လုပ်ဆောင်ချက် assign "အမြန်ဖွင့်" သင်လိုချင်သည့်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်း။ ငါကျော်ထား " p ", ပုံနှိပ်ခြင်း၏အရေးယူမှုကို overwrites ပေမယ့်ငါဘာမှမပုံနှိပ်ဘယ်တော့မှကြောင့်လည်းအလားတူပုံရသည် သူတော်ကောင်းတရားစာသား.
plugin ကို သုံး၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုသတင်းပို့ပါလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာ Hacking ။
Update: ယခုဖိုင်များ၏စာရင်းနှင့်ကိုက်ညီသောအရာများကိုစာလုံးမည်းဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ အကယ်၍ စူးစမ်းလေ့လာမည့်စီမံကိန်းကိုမတွေ့ပါက၎င်းသည်ရှာဖွေရန်တောင်းဆိုသည့်ဖိုင်၏လမ်းညွှန်ဟုယူဆနိုင်သည်။ သင် kde ကိုအသုံးပြုပါက gnome icon pack ကိုလည်းထည့်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ရင်းမြစ် - အတွက် xigurat မှရေးသားသည် CodeNinja
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » လျင်မြန်စွာဖွင့်, Geany အတွက်အခြား plugin ကို
ငါဒါကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမယ့် archive ပျက်နေပုံရတယ် မင်းကကြင်နာတတ်ပြီး github အစား code ကိုတွန်းပေးမလား။
နှင့်ဖြစ်နိုင်သည် geany plugins ကို repo မှဆွဲတောင်းဆိုမှုကိုဖွင့်လှစ်?
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပို့စ်တစ်ခုသာဖတ်ပြီးသင်က geany အတွက် plugin တစ်ခုပြသည်
ခင်ဗျား lua ထဲမှာရေးခဲ့တာက (အမြန်ဖွင့်လို့ငါခေါ်မယ်လို့ထင်တယ်) ..
ငါ Geany ကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် notepad ရဲ့ .LOG function ကိုငါလွမ်းတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ hehehe
geany ကိုအစားထိုးအနေနဲ့ SciTE ကိုသုံးတယ်၊ ဒီတစ်ခုအတွက် plugin တစ်ခုငါလုပ်တယ်
User Options ဖိုင် (SciTEUser.properties) တွင်အောက်ပါလိုင်းများကိုကျွန်ုပ်ထည့်သည်။
command.name.12 ။ * = InsertDateTimeLog
command.12 ။ * = InsertDateTimeLog
command.subsystem.12 ။ * = 3
command.mode.12 * = savebefore ။ မရှိပါ
command.shortcut.12 ။ * = Enter
ငါ Lua Startup Script တွင်အောက်ပါလိုင်းများကိုထည့်သည်။
InsertDateTimeLog function ()
ဒေသခံ Line1, esLog, esLogMayus
Line1 = အယ်ဒီတာ: GetLine (0)
Line1 == သုညလျှင် Line1 = "0000" အဆုံးလျှင်
esLog = string.sub (လိုင်း ၁၊၁၊၄)
esLogMayus == ".LOG" လျှင်
အယ်ဒီတာ: AddText ("\_ n \_ n ——————– \_ n")
အယ်ဒီတာ: AddText (os.date ("% d%% ခ။ % Y __% နာရီ -% Mm"))
အယ်ဒီတာ: AddText ("\_ n ——————– \_ n")
အခြားအယ်ဒီတာ: AddText ("\_ n")
ငါခင်ဗျားကို GEANY မှာဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့လား ... ဒါမှမဟုတ်သဲလွန်စတချို့ပေးခိုင်းချင်တယ်။
Bartolo Quero အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပါတယ်၊ ဂုဏ်ပြုပါတယ်၊ ကျွန်တော် code ကိုလေ့လာနေတာပါ။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် icons.py ဖိုင်ကိုအထူးကြည့်ရှုနေပြီး၊ ကွန်ပျူတာစနစ်ထက်အခြားအိုင်ကွန်များကိုလည်းလိုချင်သည်
Compiz မသုံးပဲ Exposure effect ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း
Geany တွင် Python ကိုအသုံးပြုခြင်း